Ny trano fivarotana mpizahatany tsy voakaingo tamin'ny tsingerintaona faha-10 an'i Korinto Hotel Khartoum, hita eo amin'ny fihaonan'ny reniranon'i Neily sy fotsy.
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Ny trano fivarotana mpizahatany tsy voakaingo tamin'ny tsingerintaona faha-10 an'i Korinto Hotel Khartoum, hita eo amin'ny fihaonan'ny reniranon'i Neily sy fotsy.
Ny fitsidihana ny tsenan'ireo mpizahatany tsy voatanisa ao Sudan sy ny renivohiny, Khartoum, dia nanjary nanintona kokoa satria ny trano fandraisam-bahiny voalohany ao an-drenivohitra, ny trano fivarotana hotely, Khorsium Hotel Khartoum, dia manome tahiry 10% amin'ny trano honenana hanampiana ny fankalazana ny fahafolon-taonan'ny hotely tamin'ity taona ity.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 17 Aogositra 2008, ny vy sy ny vera Korinto Khartoum dia natao hitovy amin'ny sambo sambo, raha jerena kosa ny toerana misy azy eo afovoan'ireo renirano manga sy manga fotsy. Manana trano fisakafoanana enina kilasy eran-tany izy ary ao anatin'izany ny trano fisakafoanana avo indrindra ao an-tanàna, ny rihana faha-18 Rickshaw Restaurant.
Ireo mpizahatany dia mandray fitsangantsanganana an-dranomasina malaza Nile ary gaga amin'ny zoma hariva amin'ny fahitana an'i Whirling Dervishes amin'ny takariva amin'ny distrikan'i Omdurman ao an-tanàna. Ny tranom-bakoka Ethnographic sy ny Archaeological Museum dia fanodinodinana tanàna hafa.
Khartoum no toerana mety indrindra hijerena ny efitra Nubiana mankany avaratra satria eto no toerana misy ny maro ny vakoka UNESCO. Anisan'izany ny Royal Necropolis ao Meroe, izay misy ny tempoly sy ny piramida 200 mahery izay toeram-pialan-tsasatr'ireo Faraona Nubiana matanjaka izay nanapaka an'i Egypty taloha.
Ny fizahan-tany any Sudan dia mitombo miadana, ny ampahany manolo an'i Egypte na "tsy maintsy-hojerena" raha vao notsidihina i Egypt. Ny toerana arkeolojikan'i Sodana dia mifanohitra amin'i Egypt ary taratry ny fitaoman'i Nubia fahiny manerana an'i Afrika Atsinanana nandritra ny an'arivony taona maro. Sudan dia mirehareha piramida betsaka kokoa noho ny mpifanila vodirindrina aminy avaratra ary tsy mila milahatra ny mpizahatany hijerena azy ireo.
Ny fonosana fahafolo taonan'ny dia ahitana trano ao amin'ny efitrano na efitrano fandraisam-bahiny, sakafo maraina, wifi maimaimpoana, fidirana amin'ny gym, piscine ary fialamboly midadasika ao anatin'ireo Sabratha Spa & Fitness Center.
Rosewood Baha Mar dia manasongadina endrika kanto Bahamian mahafinaritra
Zavatra 5 tokony hatao any Thailand ankoatry ny elefanta